DAAWO VIDEO: ”Hadduusan M/weyne Muuse Biixi dhageysan tabashada reer Awdal, wixii dhaca isagaa ka mas’uul ah!” waxaa yiri….+ (Farriin culus) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: ”Hadduusan M/weyne Muuse Biixi dhageysan tabashada reer Awdal, wixii dhaca...
Hargeysa (Halqaran.com) – Maxamed Cabdi Aw-Cabdi musharraxii madaxweyne ku xigeenka ee Xisbiga Waddani ayaa si adag uga hadlay arrimo badan oo la xiriira gobolka Awdal iyo guud ahaan deegaannada Somaliland.
Mas’uulkan ayaa sheegay, in shacabka reer Awdal ay tallaabo ku habboon qaadi doonaan, haddii xukuumadda uu hoggaamiyo Muuse Biixi aysan dhageysan tabashadooda.
Wuxuuna xusay in Somaliland ay iminka ka jirto hoggaan xumo baahsan, isagoona tilmaamay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu taasi mas’uul ka yahay.
”Haddaan la deynin dhibta lagu hayo shacabka, cuburinta iyo xariga la isugu daray, lana dhageysan tabashadooda, hadhow dhibta timaada madaxweyne Biixi adigaa ka mas’uul ah”, ayuu yiri Maxamed Cali Aw Cabdi.
Maxamed Cabdi Aw-Cabdi